Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Dimuqraadiyada maaha in ay go'aan ka gaaraan garsoorayaal iskood isu magacaabay
"Ma jiro qaab go'an oo dimoqraadiyad ah," Shiinaha ayaa ku yiri dukumeenti rasmi ah oo la daabacay Sabtidii isagoo si faahfaahsan u qeexaya dadaalladeeda dimoqraadiyadeed, iyo in waddanku yahay mid dimuqraadi ah "waa in beesha caalamku ay aqoonsato, ee maaha inay si aan kala sooc lahayn u go'aansato garsoorayaal iskood isu magacaabay. ”
Dimuqraadiyadda, warqadda cad ee ciwaankeedu yahay "Shiinaha: Dimuqraadiyadda shaqaynaysa" ayaa lagu yidhi, waa "fikrad" oo ay waligoodba jeclaayeen Xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha (CPC) iyo dadka Shiinaha.
"Boqolkii sano ee la soo dhaafay, xisbigu wuxuu dadka u horseeday xaqiijinta dimoqraadiyadda dadka ee Shiinaha. Dadka Shiinaha ayaa hadda si dhab ah gacmahooda ugu haya mustaqbalkooda iyo kan bulshada iyo dalka,” ayaa lagu yiri wargayska.
Shiinuhu waxa uu nidaamkiisa ku tilmaamay "dimuqraadiyad dadka oo dhan," ka dib markii madaxweyne Xi Jinping uu fikradda soo jeediyay laba sano ka hor magaalada Shanghai. Mabda’aasi waxa uu xalaalaynayaa ka-qaybgalka dadka ee dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee maalinlaha ah ee heer kasta oo kala duwan, marka la isku daro doorashooyin dimuqraadi ah, wadatashi siyaasadeed, go’aan-qaadasho iyo kormeer.
Maqaamka ay dadku ku leeyihiin sida sayidiyeyaasha dalka waa nuxurka dimuqraadiyadda dadka, ayaa lagu yidhi dukumeentiga uu sii daayay Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Dawladda Shiinaha.
'Dimuqraadiyada Shiinaha waxay leedahay dhaqammo la taaban karo oo la taaban karo'
"Shiinaha, dhaqanka caadiga ah waa in la maqlo codadka dadka, lagu dhaqmo baahiyahooda, oo la mideeyo fikradahooda iyo xooggooda," ayaa lagu yiri dukumeentigu.
Sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah, Shiinuhu wuxuu qabtay 12 doorasho oo toos ah shirarka dadweynaha ee heer degmo iyo 11 doorasho toos ah oo heer gobol ah, iyada oo heerka ka qaybgalka hadda uu yahay 90 boqolkiiba, tan iyo markii la bilaabay dib u habeynta iyo furitaanka.
La tashiga dimuqraadigu waa astaan ​​gaar ah oo dimoqraadiyadda Shiinaha. Dadka Shiinuhu waxay si weyn u adeegsadaan xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan doorashooyinka waxayna sameeyaan doodo badan ka hor inta aan la gaarin go'aanno waaweyn.
Wargeysku waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyay in ku takri falka awoodda ee dano gaar ahaaneed lagu ciribtiro kormeer dimoqraadi ah oo hufan oo hufan.
Kormeerka awooddu wuxuu ku fidsan yahay aag kasta iyo gees kasta, ayay tidhi.
Habka dimoqraadiyada ee Shiinaha
Halkii ay si fudud u koobi lahaayeen moodooyinka dimuqraadiga ah ee kuwa kale, Shiinuhu waxa uu tixgaliyaa "xaalihiisa qaran iyo xaqiiqooyinkeeda" oo ay muujiyaan runteeda.
"Shiinuhu waxa uu soo jiitaa mid kasta iyo guul kasta oo siyaasadeed oo ay gaadheen dalalka kale, laakiin kuma dayana mid ka mid ah moodalkooda dimuqraadiyadda," ayaa lagu yidhi dukumeentigu. "Modelka ku habboon had iyo jeer waa kan ugu habboon."
Nidaamka guud ee dimoqraadiyada dadku waxay la jaan qaadayaan sifooyinka gaarka ah ee waddanku leeyahay, isla markaana ka tarjumaysa "rabitaanka caalamiga ah ee bini'aadamka ee dimuqraadiyadda."
Raadinta bini'aadantinimada iyo tijaabinta dimoqraadiyad weyn weligeed ma dhammaan doonto, ayuu yiri wargeysku.
Caqabadda dhabta ah ee dimuquraadiyadu kuma xidhna noocyada kala duwan ee dimuquraadiyada, balse waxay ku jirtaa isla wayni, eex iyo cadaawad ay wadamada kale isku dayaan inay sahamiyaan wadooyinkooda dimuquraadiyada, iyo iyagoo u qaatay inay ka sareeyaan iyo inay go’aansadaan inay ku soo rogaan qaabka dimoqraadiyada dadka kale. ayay raacisay.